आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
१० कार्तिक २०७८, बुधवार
जनता भ्वाइस calendar_today २० बैशाख २०७७, 11:50 pm
काठमाडौं । आज बिश्व प्रेस स्बतन्त्र दिवस । राज्यको चौथो अगं हो । हरेक वर्षको मे महिनाको ३ तारीखका दिन विश्वभरि सञ्चारका माध्यमहरुको स्वतन्त्रताका मुद्धा, मापदण्ड र महत्वको विषयमा पैरवी अनि वहस गरिदै समाचार संकलनका क्रममा जोखिममा परेका र ज्यान गुमाएका पत्रकारहरुको योगदानलाई संझना र सम्मान गर्दै मनाईन्छ । सन् १९९३ को संयूक्त राष्ट्रसघींय महासभाले अनुमोदन गरेपछी यस दिन संसार भरि प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो ।
तर यो पटक कोरोना भाइरस महामारीले कुनै औपचारीक कार्याक्रम भने आयोजा नगरिने भएको छ । आज नेपाल पत्रकार महासंघले डिजिटन सम्वादको आयोजना गरि मनाइने जनाएको छ । कोरोना महामारीलाइ ध्यानमा राख्दै यो कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ ।
सञ्चारका माध्यमहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छन् । नागरिकहरुको सुचनाको अधिकार स्वतन्त्रता अनि निष्पक्षताको वकालत गर्ने आजको विश्वमै दर्जन भन्दा धेरै देशहरुमा प्रेसउपर सेन्सर गरिन्छ । यसका साथै आजको दिनले संसारभरिका प्रेसकर्मीहरुलाई प्रेस तठस्तताको पाठ र महत्वको झल्को दिने कार्य गर्दछ ।
पछील्लो दशकमा प्रजातन्त्रको पूर्नआगमन सँगै नेपालमा पनि प्रेसकर्म प्रतीको एउटा उत्साह बढेको छ । रेडियो नेपाललाई शर्टवेभमा मात्र एन्टीना तानेपछी समात्ने नेपाली तरगं आकाशमा आज सैयौको सख्यामा रेडियो केन्द्हरु छन् । त्यसै गरि टीभी, पत्रिका, अनलाईन गरि विभिन्न स्वरुपमा धेरै सञ्चार केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् । यो एउटा संचारको विकास हो । तथापि हरेक विकासँगै आउने चुनौतीहरुझै प्रेस स्वतन्त्रता अनि निष्पक्षताका मर्महरु नेपालमा अजै पनि चहिदो रुपमा हुन सकोको छैन । सरकारी ब्यवस्थाका कारण यस्तो अबस्था आएको हो ।
४६ सालको आन्दोलन या १० वर्षे शसस्त्र द्धन्द या ६२/६३ को जनआन्दोलनमा पत्रकारले पाएको सुचना अनि ताजा अपडेटहरु दिनका लागी धेरै जना पत्रकारले पसिना वगाउने, ज्यान जोखिममा राखेर अनि कतिले त ज्याननै गुमाउएका छन ।
नेपालमा मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापा छन् । त्यस्तै अफगानिस्तानमा मारिने कुनै अन्य देशका पत्रकार तर यसरी प्रेसमाथीको आक्रमणले स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रमाथीनै धावा बोलेको छ । आजको दिनमा पेस स्वातन्त्रता विभिन्न विधेक लगायतमा कारण पेसमाथी सङकोरन न्याउने काम पनि हुनथालेको छ ।
सही, सत्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउनु आहको आवश्यकता हो ।
जनता स्पेसलबाट थप
लिंगेपिङ हाल्ने र खेल्ने परम्परा हराउदै
कांग्रेस रामेछाप अधिवेशन- न्याय भयो, वर्चस्व तोडियो
पार्क समिति, स्थानीय सरकार र मन्त्रीहरुलाई गिज्याउँदै बिटारपार्क
मन्थली मा वि.मा काण्डै काण्ड, काण्डमा मुछिने मन्थली नगरका कर्मचारी…
प्रतिवेदन लुकाउँदै ध्यानाकर्षण
आज पनि बस्दै एमाले स्थायी कमिटीको बैठक, यस्ता छन् एजेण्डा
जनता भ्वाइस calendar_today ५ कार्तिक २०७८, 3:33 am
शुक्रवार, कार्तिक ५ ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बस्नेछ । बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मंसिरमा तय दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलबाट चितवनमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा २१ सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
पार्टीले भोलि शनिबार देशैभरिका वडाहरूमा पार्टीको अधिवेशन गर्दैछ । तर, यसैसाता आएको बाढी–पहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका वडाहरूको अधिवेशन भने पछि सारिने भएको छ ।
शनिबार वडा अधिवेशन सुरु हुने कार्यतालिका रहेका बेला स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो । तर, बाढीपहिरोको चपेटामा परेका वडाको अधिवेशन सारिने भएको हो ।
१०बुँदे कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्ने
आजको बैठकमा १० बुँदे कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। उपाध्यक्ष भीम रावल संयोजक रहेको कार्यदलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तय गरिसकेको छ । यो कार्यदलको बैठक बिहीबार पनि बसेको थियो ।
रावलको नेतृत्वमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र लेखराज भट्ट छन् ।
माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका १० नेताले १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए पनि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भने अस्वीकार गर्छन्। उनले एमालेले १० बुँदे सहमति ९७ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरे ।
बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केही ठाउँमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए । नेपाली नेटवर्कले लेखेको छ ।
पुरा भयो एमाले रामेछापको अधिवेशनको तयारी
जनता भ्वाइस calendar_today ४ कार्तिक २०७८, 11:41 am
रामेछाप, कार्तिक ५। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले रामेछापले अधिवेशनको तयारी सकिएको बताएको छ । एमाले रामेछापले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अधिवेशनको तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ ।
एमाले रामेछापका सचिव आनन्द श्रेष्ठले अधिवेशनमा संगठित सदस्य तथा पार्टीका कार्यकर्ताको बृहत उपस्थिति गराउने तर अधिवेशनलाई कम खर्चिलो बनाउने योजना रहेको बताएका छन् ।
२ वटा वडामा अधिवेशन सम्पन्न गरि सकेको एमाले रामेछापले
बाँकी ६२ वडामा भने कार्तिक छ गते शनिबार एकसाथ अधिवेशन गर्ने भएको छ ।
कार्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन हुने नेकपा एमाले रामेछापले जनाएको छ ।
मन्थली-१३ मा समाजवादीको कमिटि गठन सँगै कार्यालय उद्घाटन
जनता भ्वाइस calendar_today ३ कार्तिक २०७८, 4:20 am
कार्तिक २, रामेछाप । मन्थली नगरपालिका वडा नं. १३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजबादीले वडा कमिटी गठन गरि वडा कार्यालय समेत उद्घाटन गरेको छ ।
एकीकृत समाजबादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य देब शंकर पौडेल , प्रदेश सदस्य दुर्गा घिमिरे,रामेछाप पार्टी अध्यक्ष रमेश बस्नेत सहितको भेलाले बिबेक अधिकारीलाई अध्यक्ष, जीवन कटुवाललाई उपध्यक्ष , सरोज भुजेललाई सचिब र दिपेश अधिकारी र बिमला अधिकारीलाई उपसचिवमा चयन गरेको छ । यि पदाधिकारी सहित मन्थली नगरपालिका वडा नं. १३ को एकीकृत समाजबादी वडा कमिटि १५ सदस्यिय भएको छ ।
बचपन र दशैं
Kumar Shrestha calendar_today ३ कार्तिक २०७८, 3:41 am
बचपन जिन्दगीको उत्तम समय हो । यो उमेरमा न कुनै पीर, न कुनै बोझ । आनन्दै आनन्द । मोजाको भकुण्डो, काठ अनि झिंजाका टुक्राटुक्रीदेखि लिएर साना भन्दा साना चीजले सन्तुष्ट हुने उमेर पनि यै हो । चाडपर्वमा मामाघर जानु, दशैंमा पिङ खेल्नु, गाउँभरि डुलेर टीका र जमरा लगाउनु अनि थोरै दक्षिणामा पनि रमाउनु । यस्ता दिन र पलहरु जिन्दगीमा बारम्बार दोहोरिेएर आउँदैन ।
दशैंमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको टीकाजमरा र पिङ नै हो । विशेष सहरको दशैं भन्दा गाउँको दशैं बेग्लै रमाइलो हुन्छ । दशैं आएपछि छिमेकी मिलेर रातो कालो अनि सेतो माटो लिन गइन्छ । अनि भिजाएर चोटाकोठा लिपिन्छ । साँघुरा अनि बर्खाले बिगारेका बाटो बनाइन्छ । परदेश अनि राजधानी र सदरमुकाम पढ्न अनि जागिरका लागि गएकाहरु घर फर्किन्छन् । यति भएपछि गाउँ पनि उज्यालो देखिन्छ । खालि घर लिपेर या बाटो सफा भएर मात्रै दशैंमा गाउँ उज्यालो देखिने होइन । गाउँ उज्यालो त घरबाट पर रहेकाहरु घर फर्किएकाले पनि देखिएको हो ।
उबेला बचपन छँदा बाले फ्रक ल्याइदिनुहुन्थ्यो झमझम मुजा परेका । त्यो फ्रक लगाएर गाउँभरि टीका लगाउने डुलिन्थ्यो । दक्षिणा स्वरुप दिएका ढ्याक पैसा खल्तीमा राखेपछि बज्दाको रमाइलो नै बेग्लै हुन्थ्यो । टीका सकिएपछि दाजूदिदीहरुले बनाएको रोटेपिङ र लिङ्ग खेलिन्थ्योे । आहा! त्यो बचपन फर्काएर कहाँ फर्किनु ? अब त पिङ खेल्छु भनेपनि पिङ भेटिदैन । यदाकदा लिङ्गे पिङ भेटिन्छ । तर रोटेपिङ भने लगभग अब मासिइनै सक्यो । अहिलेका साना केटाकेटीहरु पिङ भनेको खालि चित्रमा मात्र देख्दछन् । दशैंमा घर लिप्ने चलन पनि यदाकदा मात्रै छ ।
बचपन र दशैंका याद भनेको जिन्दगीभरका लागि साह्रै सुन्दर समय हो । फेरि फेरि त्यो दोहोरिएर आउँदैन । तर हिजोको दशैं र आजको दशैंमा धेरै अन्तर छ । हिजो दशैं भनेको पिङ टीका जमरालाई महत्व दिइन्थ्यो तर हिजोआज दशैं भनेको मिठो खानु राम्रो लाउनु मात्र बुझिन्छ । हिजोआज बालबालिका पनि पिङमा भन्दा ज्यादा मोबाइलमा झुण्डिएर बस्छन् । आफू भन्दा ठूलाको हातबाट टीकाजमरा र आशिर्वाद गह्रण गर्ने अनि गाउँभरि डुलेर टीका थाप्ने चलन पनि लगभग हराइसक्यो । चाडपर्व भनेको हाम्रो संस्कृति हो । संस्कृतिले नै ब्यक्तिको पहिचान हुन्छ । संस्कृति भनेको देशको पनि पहिचान हो । अतः देश चिनिनका लागि पनि संस्कृतिहरु बाचिरहनुपर्छ ।
जनता भ्वाइस calendar_today ३ कार्तिक २०७८, 3:28 am
रामेछापमा लिंगेपिङ हाल्ने र खेल्ने परम्परा विस्तारै हराउदै गएको छ ।
केहि वर्ष अघिसम्म प्रत्येक टोल टोलमा लिंगेपिङ हाल्ने र खेल्ने चलन थियो । टीकाको दिन मान्यजनबाट टीका जमरा लगाएपछि एक पटक पिङ खेल्नै पर्छ र धर्ती छोड्न पर्छ भन्ने मान्यता थियो ।
दशैँ भन्ने वित्तिकै धेरैलाई गाउँघरमा हालिने लिङ्गेपिङकोे याद आउथ्यो र आउँछ । एक समय दसैं तिहारमा ग्रामिण भेगमा लिंगेपिङ मुख्य आकर्षण हुन्थ्यो ।
बिस्तारै मनोरञ्जनका अन्य साधन पनि गाउँ भित्रिन थालेपछि गाउँघरबाट पिङ लोप हुन थालेको छ ।
पहिले पिङ खेल्न गाउँका सबै जम्मा हुने, दुःख सुख बाढ्ने चलन रहेको थियो । तर पछिल्लो केहि दशक यता दशैँमा पिङ देख्नै मुस्किल हुने गरेको छ । मानिसहरु आफ्नै मोवाइलमा भूल्ने कारणले पिङ हाल्ने र खेल्नेहरु कम हुँदै गएका छन् । दसैँका बेला गाउँका चौतारी, दोबाटो र डाँडामा जम्मा भएर सामूहिक लिङ्गेपिङ खेल्ने र रमाइलो गर्ने परम्परा हराएको प्रति बूढापाका र यूवा पुस्ताका केही भने दुःख लागेको बताउँछन् । पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्णको पाला भन्दा अगाडि देखि पिङको विकास भएको बताइन्छ ।
धर्मशास्त्र अनुसार दशैँसँग पिङको विषेश महत्व जोडिएको छ तर यूवा पिडीहरु विदेशिने क्रम बढेसँगै दशैमा पिङको चलन हराउदै जान थालेको धर्मशास्त्रविद् डा. रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ । पिङ र दशैँको धार्मिक कथन एकातिर छ भने अर्को तर्फ यसलाई नेपाली समाजको मौलिक संस्कृतिको रुपमा समेत चित्रण गरिन्छ । तर पछिल्लो समय पिङ्सँग जोडिएको परम्परा हराउँदै जान थालेको छ ।
उहिलेको दसैँ ‘एक्चुअल’: अहिलेको दसैँ ‘भर्चुअल’ !
जनता भ्वाइस calendar_today १ कार्तिक २०७८, 8:50 am
दसैँ नेपाली हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । दसैँलाई उत्तर वैदिक कालदेखि नै मनाइन थालेको दृष्टांश रामायणमा आदर्श पुरुष रामचन्द्रले उनकी भार्या सीता रावणबाट हरण भएर युद्धको तयारीमा गरेको देवी पूजनोत्सवले समेत इङ्गित गर्दछ ।सोकुरा पत्ता लगाएर युद्धको तयारी गर्दा आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा (घटस्थापना) देखि नवमीसम्म दुर्गा माताको भक्तिका साथ ९ दिनसम्म पूजार्चना गरी दसौं दिनमा पूजा समापन गरेर देवीको प्रसादस्वरूप टीकाजमरा ग्रहण गरी रावण युद्धमा विजय हासिल गरेको सन्दर्भमा विजयादशमी भनेर मनाउन थालिएको हो । हजारौं वर्षसम्म दसैँलाई सम्पूर्ण हिन्दूहरूको महान् चाड भनेर मनाइए पनि यो सबै हिन्दूहरूको महान् चाड भने होइन । खानपिन मात्र गर्ने तर टीका नगलाउने हिन्दूहरू नेपालभित्रै धेरै भेटिन्छन् ।
हिन्दू धर्ममा धेरै सम्प्रदायहरु छन् । कृष्णलाई मान्ने कृष्ण प्रणामी, विष्णुलाई मान्ने वैष्णव, शिवलाई मान्ने शैव र शक्तिलाई मान्ने शाक्तहरू हुन् । शाक्तलाई मान्ने भएकैले हामी शक्तिपूजारी हौं । यसरी कृष्ण, विष्णु, महेश र देवी सबैलाई मान्नेचाहिँ सनातनी भक्तहरु हुन् ।
जहाँसम्म नेपालीहरूले यो चाड मनाउने सन्दर्भमा अहिले यसको शैली परिवर्तन भएको छ । हिजो कृषिको युग थियो सबै वस्तुहरू खेतीपाती र उब्जनीबाटै प्राप्त हुुुन्थे तर आज नेपालीहरूको जनजीवन र पेसा समेत परिवर्तन भएका छन् ।
हिजो खोजेर, तुल्याएर, उब्जाएर र भेलाजम्मा पारेर मनाइने दसैँको रौनक घटस्थापनाका दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमा दिनसम्म रहन्थ्यो । परदेश र घरदेशका आफन्तहरू सप्पै गुरुप्पै घरमा जम्मा हुन्थे ।
रामरमाइलो हुन्थ्यो । अनुभवका आदानप्रदान, खेलबाड, हाँसोठट्टा, भेटघाट र अनेक किसिमका सन्दर्भहरु आदानप्रदान हुन्थे । गरिब गुरुवाहरू समेत दसैँमा राम्रा लुगा र मिठा खाना भनेर साँच्ने गर्दछे ।
हुनेलाई वर्षैभरि दसैँ हुन्थ्यो भने नहुनेलाई वर्षको कम्तिमा १५ दिन भए पनि आनन्दले खाने, पिउने, घुम्ने र मनोरञ्जन गर्ने दिन हुन्थे । जीवन शैलीका तौरतरिका फेरिएपछि दसैँको रौनक बद्लियो ।
हामी सम्मपचास माथिको उमेर भएकाहरुले दसैँको अर्गेनिक शैली र अनुभवहरु देख्यौं । त्यो दसैँ अब हाम्रा दिमागमा मात्र रहेको छ ।
हाम्रा पिताजी र माताजीहरुले अझ घच्ची पाराले दसैँ मनउने चलन देख्नु भयो । भोग्नु भयो । यो मानेमा हामीभन्दा हाम्रा अभिभावकहरु महान् छन् ।
घर, आगँन र बारीका डिलमा रोटे, जाँते र लिङ्गे पिङहरू सामूहिक रुपमा हालिन्थ्यो । खोरमा जखमले बोका खसीहरू हुन्थे । घरीका घरी केरा पकाउन खाडल खनेर पोलिन्थ्यो ।
चिउरा कुटिन्थे । पारि डाँडामा कुटेको ढिकीको आवाजले अब दसैँ उतैबाट आउँदै छ है भनेर थाहा हुन्थ्यो । यो शैली कसैले सेभ गरेर राखेको छैन । चलचित्र र कथाहरुमा यदाकथा देख्न र पढ्न पाइनु बेग्लै कुरा हो ।
गेरु र कमेरो लिन हुरुरुरुरुरु पाखामा गइन्थ्यो । निःशुल्क लिन पाइने गेरु र कमेरो अहिलेको जस्तो किनुवा र मिसावटी हुँदैनथ्यो ।
कस्तो मजा घरमा पाहुना पासालाई अघाउँजी खिलाउन पिलाउन पाउँदा । आफू जहाँ गए पनि उधुमै मानमनितो हुन्थ्यो । मावली जाऊँ कि ससुराली ? घरमा जम्मा होऊँ कि साथीभाइ कहाँ ? हरेक जमघट र पारिवारिक मिलनले आउने एक वर्षसम्मका लागि नयाँ ऊर्जा थपिरहन्थ्यो ।
अब ती सबै हराए । नयाँ पुस्ताले केही थाहा पाउँदैनन् । एक्चुअल दसैँ जो जति पाको र उमेरको भएको छ उसले उति नै भोगेको र देखेको छ । जो जति कम उमेरको छ उसले तेती नै कम भोगेको र देखेको छ । अब त सबै कुरा गुगल र यु ट्यूबका भर पर्ने पुस्ता भैसके । बाख्राको पाठो र बोको भन्न नजान्ने पुस्ताले गुगल गरेर खसीलाई बाख्राको छोरो भन्ने अर्थ पायो भने त्यही भन्छ । आफू भित्रको ज्ञानलाई भन्दा पराश्रित सूचनालाई अब्बल मान्ने जमान आएछन् ।
कठै ! ती दिन गैगए ।
नेपालीहरू रोजगारीका लागि जब विदेश जान थाले अनि वर्ष दिनमा पनि ती घर आई नपुग्ने भए । अतः दसैँमा परिवारका सदस्यहरू जम्मा भएर चाड मनाउने दिन हराउँदै गए ।
विगत् केही समयदेखि नेपालले वार्षिक १४ अर्ब बराबरको चामल आयात गर्छ । यो अवस्था युवाहरू जति सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आएको हो ।
नेपाल अब पञ्चायत कालमा भनिएजस्तै कृषि प्रधान देश रहेन । यो अब श्रम निर्यातप्रधान देश भयो । विदेशीका भरिया, गुलाम, पाले, श्रमिक र थोरै मात्र सीपयुक्त श्रम बेच्ने हैसियतमा नेपालीहरू पुगे ।
फेरि धनी देशमा पिआर र ग्रीन कार्ड लिएर उतैका बासिन्दा हुने चलनसमेत चले । यो अवस्थाले गर्दा जाति र धर्मका आधारमा मनाइँदै आइएका चाडपर्वका रौनक कम भएर निस्तेज हुँदै गए ।
बीचमा जनजातिहरूले दसैँ मनाउने शैलीमा अनुसन्धान गरे । केहीले बखेडा शुरू गरे । अघिपछि दसैँको विरोध गर्ने जनजाति नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा महिला बालबालिका मन्त्री हुँदा कुद्दै राजदरबार गएर राजाको हातको टीकाजमरा ग्रहण गरे ।
कतिपय जनजाति समुदायले दही मुछेको सेतो अक्षतामात्र लगाउने चलन चलाए । कोही टीकै नलगाउने, कोही सेतो लगाउने र कोही सबै लगाउने यसरी दसैँमा विविधता आयो ।
चाडपर्व मनाउने दिनहरू कटौति भए । १५ दिनबाट स्कुल कलेजहरू ८ दिनमा झरे । अदालत अझै १५ दिनै विदा दिने चलन छ । कोरोनाले मानिसको जीवनशैली तहसनहस बनायो ।
राज्यको पुनर्संरचना भएपछि हाइस्कुल शिक्षा (१–१२) को लगाम स्थानीय तह (गाउँपालिकादेखि महानागरपालिकासम्म) ले कानुनः जिम्मा पाए अनि उनीहरूले कहिले कोरोना निहूँमा, कहिले स्थानीय तह चुनावमा सहयोग नगरेका निहूँमा र कहिले गाउँका सिँहदरबार र आफू चन्द्र शमशेरका भएका निहूँमा मास्टर पेल्ने नीति बनाए । भविष्यमा यसको सूक्ष्म अध्ययन र सन्धान हुँदै जाला !
अहिले देशमा केही पालिकाका स्कुललाई छाडेर सबै पालिका भित्रका स्कुलहरू फूलपातीको अघिल्लो दिनसम्म खुल्ला छन् । कसैले परीक्षा र कसैले कक्षा सञ्चालन गर्दैछन् ।
हिन्दी उखान छ ‘बन्दुक मिलगया तो हबल्दार बनगया’। यो भयो शासनको बेढङ्गी ढर्रा । के कोरोनाका कारण लकडाउन निजामति, जङ्गी र न्यायालयका कर्मचारीलाई भएको थिएन ? के उद्योगधन्दा, पर्यटन, यातायात, मनोरञ्जन र सेवा उद्योगहरू बन्द भएका थिएनन् ?
राज्यले सबैलाई छुट दिएका सन्दर्भमा हाइस्कुलका विद्यार्थी र मास्टर लक्षित जुन पेलानको नीति पालिका स्तरबाट लिइएको छ त्यो सर्वथा आलोच्य छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिका जहाँ अहिलेसम्म शिक्षाको पोलिसी बनाउने, अनुगमन गर्ने र पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन गर्ने कुनै जनशक्ति सरकारले परिचालन गरेको छैन ।
जनप्रतिनिधिले सबैथोक जानेका हुँदैनन् । जाने पनि व्यक्तिका सीमा हुन्छन् । ती सीमा भित्रका व्यक्तिहरूले शिक्षा जस्तो देशको मेरुदण्ड नै चलाउने अधिकार पाएपछि अबको १०÷१५ वर्षमा देखिनेछ बास्तविक नतिजा ।
नेपाल शिक्षक महासंघले त हाइस्कुललाई फेरि संघकै मातहतमा राखिनु पर्छ भनेर धर्ना कार्यक्रम राखिसक्यो । यसरी सधैँ भुकुण्डिने भए शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू ।
तमासे राज्यमा यस्ता घटना धेरै देखिन्छन् । फूलपातीका अघिल्लो दिनसम्म काम गरेर घर जानु पर्ने शिक्षकले कसरी दसैँ तयारी गर्ने होलान् ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत फूलपातीदेखि एकादशीसम्म बन्द भैदिन्छन् । यस्तो बेलाँ कसरी बालबच्चा र परिवारलाई हँसाउन सकिन्छ । भन्न खोजिएको कुरा ‘सिष्टम बसाऊ भनेको हो । धेर विदा देऊ, पढाउनु नपरोस्’ भनेको पक्कै होइन ।
दसैँको अन्तर्यमा जौका जमरा, अक्षताका टीका र दहीको मिश्रण र अग्रज पुस्ताबाट आशीर्वाद लिने जुन परम्परा छ त्यसका धेरै दार्शनिक कारण छन् । जौ पृथ्वीमा मानिसले सबैभन्दा पहिले लगाएको बाली हो ।
यो शीरमा लगाउँदा यसले गर्ने शीतलता, अन्नको राजा धान र धानको सम्मान र गोरस भनिने दहीलाई जीवनको लाइफ लाइन भनिएको हो ।
पुर्खाले गरेका पारम्परिक चाडपर्व, मेलाजात्रा, संस्कार, चलन र पूजाआजाका हरेकका माने मतलब छन् ।
अहिलेका पढे लेखेका हौं भन्ने आधुनिक व्यक्तिहरूले विज्ञानका आधारमा यी धर्म र परम्पराका सबै मान्यतामा क्रमशः प्रहार गरिरहेछन् । यो सोरै आना गलत छ ।
दसैँको अर्थ राजनीति कस्तो चर्को छ भने मुुद्रा, बेपार, उद्योगधन्दा, पर्यटन, होटल, यातायात र सेवा क्षेत्रमा वार्षिक कारोबारको ८० प्रतिशत कारोबार दसैँकै बेला हुनेगर्छ ।
यसरी दसैँलाई पर्खने चलन भित्रको यो सत्य पक्षलाई जो कोहीले हम्मेसी पक्रेर विश्लेषण गर्न सक्दैन ।
दसैँको पहिलो दिन घटस्थापनाका दिन शैलपुत्री देवी भगवतीको आराधना गरी घरघरमा घटस्थापनाका घरी वैदिक पूजाआजाका साथ जमरा राख्ने काम हुन्छ ।
यसपछि दिनहूँ फरकफरक देवीको विधिवत् पूजा गर्र्दै सातौं दिनमा फूलपाती भित्र्याउने र दसौं दिनमा देवी विसर्जन गरी मान्यजनबाट टीका लगाउने परम्परा छ ।
असत्यमाथि सत्यको, दानवी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको, अन्यायमाथि न्यायको, अधर्ममाथि धर्मको र पापाचारमाथि सदाचारको विजय पर्वका रूपमा विश्वभरि छरिएर रहेका समस्त हिन्दूहरूमा विजया दशमी –२०७८ को असिम शुभकामना भन्न त मन छ तर के गर्नु यतिखेर रामराज्य पृथ्वीमा सारै थोरै भूगोलमा छ ।
यत्र, तत्र र सर्वत्र ‘रावणहरुकै राज्य’ देदिप्यमान छ । यस्तो अवस्थामा रावणहरुको विरुद्धमा रामको पक्षमा कसरी पो शुभकामना दिन सकिन्छ ? तैपनि बडा दसैँको सबै सबैमा असिम र अनन्त शुभकामना ।।
Kumar Shrestha calendar_today २० असोज २०७८, 4:37 am
२० असोज, रामेछाप । नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका लागि चुनिनु पर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भै सकेको छ । रामेछाप कांग्रेसले यसपालीको मत परिणाम भने युवाको पोल्टोमा बर्चस्व कायम हुने गरि दिएको छ । खुल्ला पुरुष महाधिवेशन प्रतिनिधि तर्फ केहि पुराना नेताहरूलाई न्याय गरेको छ भने युवाहरूलाई समेत निर्वाचित गराएको छ ।रामेछाप कांग्रेसले रामेछाप कांग्रेसका पुराना नेता अर्जुन केसीलाई खुल्ला पुरुष महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पहिलो मत दिएर पठायो।
यता खुल्ला महिला तर्फको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने गंगा अधिकारी जस्तो शसक्त उम्मेद्वारलाई समेत पछि पारेर बिनिता खड्का पहिलो मतका साथ खुल्ला महिला तर्फको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भईन् । खड्का १९ वर्षको उमेरमै १३ औँ महाधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनि सकेकी युवा नेतृ हुन् ।
खसआर्य पुरुष महाधिवेशन प्रतिनिधिमा महेश कार्कीले पहिलो मत ल्याए भने खसआर्य महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मिनाकुमारी कार्की निर्वाचित भईन ।
जनजाती पुरुष महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नयाँ अनुहार गेल्जे शेर्पाले पहिलो मत ल्याएका छन् । जनजाती महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत कुमारी हायुले प्रथम मत ल्याएकी छिन् ।
त्यस्तै अल्पसंख्यकतर्फ शुक्र माझी अत्याधिक मतका साथ बिजयी भएका छन् भने दलिततर्फ वलबहादुर परियार बिजयी भएका छन् ।
रामेछाप नेपाली कांग्रेसबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि बिजयीहरूको नामावली
खुल्ला महिला खुल्ला पुरुष खशआर्य महिला
१ विनिता खड्का ६८० १ अर्जुन केसी ७६० १ मिनाकुमारी कार्की ६२३
२ उषा कार्की (बस्नेत) ५४० २ आङटावा शेर्पा ५३४ खसआर्य पुरुष
३ गंगा अधिकारी ५५३ ३ झपडराज भण्डारी ५२१ २ महेश क. कार्की ६६२
४ एन्जिला न्यौपाने ५०६ ४ ध्रुबहरी ढुङ्गेल ६५२ २ केशब प्र. चालिसे ५६७
जनजाती महिला ५ भरत प्रसाद चौलागाँई ७३० जनजाती पुरुष
कुमारी हायू ५९५ ६ युवराज भट्टराई ५९९ १ गेल्जे शेर्पा ५८९
रामकुमारी डाँगी ५४९ ७ रत्न बहादुर कार्की ७२२ २ जितेन्द्रकुमार मोक्तान ५२३
खमला थापा मगर ४७८ ८ रामचन्द्र खड्का ६८८ ३ नरबहादुर थापामगर ५४०
दलित ९ रत्नहरी ढुङ्गेल ५२८ अल्पसंख्यक
बलबहादुर दमाई ६६० १० विरबहादुर तामाङ ५३२ १ शुक्र माझी ६२३
रामेछाप कांग्रेसको सभापतिमा कान्छाराम निर्वाचित
जनता भ्वाइस calendar_today १८ असोज २०७८, 8:01 am
१८ असोज, रामेछाप ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गतको रामेछाप जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला सभापतिमा पूर्ण बहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ निर्वाचित भएका छन् । आइतवार सम्पन्न मतदानमा सभापतिका प्रतिस्पर्धी मध्ये कान्छारामले ४९.४१ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । उनले ५० प्रतिशत कटाउन थोरै मात्र मत नपुगेपछि पुनः निर्वाचन हुने तयारी गरिएको थियो ।
तर मतदान हुनु अगावै सहमति भएसँगै पुनः मतदान नगरी सभापतिमा कान्छाराम निर्वाचित भएका छन् । हिजो भएको चुनावमा लवश्री न्यौपानेले ३५६ मत, अर्का प्रत्याशी कृष्णबहादुर महतले ३२८ मत र कान्छारामले ६६८ मत पाएका थिए । सभापतिका उम्मेदवारद्धय न्यौपाने र कान्छारामबीच सहमति जुटेसँगै कान्छाराम पहिलो पटक जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । हिजो सम्पन्न मतदानमा १३ सय ८८ मत खसेको थियो ।
रामेछाप कांग्रेसको मतदान स्थगित
जनता भ्वाइस calendar_today १६ असोज २०७८, 5:05 pm
रामेछाप । नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशन अन्तर्गतको रामेछाप जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको छ। निर्वाचन भै रहेको समयमा विवाद उत्पन्न भए पछि मतदान प्रकृया स्थगित भएको हो । बिबाद समाधान पश्चात मतदान पुन: आइतबार बिहान ९ बजे बाट सुचारु हुने निर्वाचन अधिकृत विष्णु लुइटेलले जानकारी दिए। जम्मा १ हजार ४ सय १३ प्रतिनिधि मध्ये आज ६ सय ६८ प्रतिनिधिले मात्र मतदान गरेका छन।
नक्कली लाईसेन्स बोकी मन्थलीमा अटो चलाउने एक पक्राउ
जनता भ्वाइस calendar_today १५ असोज २०७८, 8:04 am
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका -१ मा नक्कली लाईसेन्स बोकेर अटो चलाउने एक जना पक्राउमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा नक्कली लाईसेन्स बोक्ने ज.१ ह ५०५१ का अटो चालक बिर्खबहादुर माझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको रामेछाप जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख बिकल भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेस रामेछापको प्रदेश सभाको चुनावी अपडेट
Kumar Shrestha calendar_today १४ असोज २०७८, 6:38 pm
प्रदेश सभा 'ख' प्रदेश सभा 'क'
क्र.सं. क्षेत्रीय सभापति मत क्र.सं. क्षेत्रीय सभापति मत
1 राजेश कुमार श्रेष्ठ ४३३ बिजयी 1 केशब महत २८५
2 रामकृष्ण ढुङ्गेल २९२2निरोज खडका २९४ बिजयी
क्र.सं. क्षेत्रीय सचिव मत क्र.सं. क्षेत्रीय सचिव मत
1 बेन बहादुर थापा मगर ४११ बिजयी 1 सम्शेर कार्की २४३
2 भेष बहादुर थापा ३४४ बिजयी2कुलराज सुनुवार
डिबि बहादुर तामाङ
राजकुमार केसी ३३३ बिजयी
3 सुवास जङ्ग थापा मगर २९१
4 होम बहादुर श्रेष्ठ (भान्जा) ३२९ क्र.सं. उप-सभापति मत
1 मुरारी घिमिरे ३३८ बिजयी
क्र.सं. उप-सभापति मत2पूर्ण मगर ३२२ बिजयी
1 अर्जुन लाल श्रेष्ठ २७७ चन्द्र प्रधान
राम कुमार कार्की १९३
2 पुर्ण बहादुर सुवेदी ४७९ बिजयी क्र.सं. सह-सचिव मत
3 बाबुराम लामा ३८२ बिजयी 1 ज्ञान प्रसाद सुवेदी २२८
4 श्यामलाल योञ्जन २२८2कुमार श्रेष्ठ
सरोज कुमार सुनुवार
गोपाल खड्का २९७ बिजयी
क्र.सं. सह-सचिव मत क्र.सं. खुल्ला प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि पुरुष मत
1 टाँशी लामा ४६७ बिजयी 1 उज्वलराम घिमिरे ३४२
2 फडिन्द्र बहादुर कार्की २८३2पदम माझी
केशव बहादुर माझी
गुणराज भट्टराई २२२
3 सुजन घिसिङ तामाङ २८७3नारायण भट्टराई २१६
4 सुन्दर घिमिरे ३२८ बिजयी4रमेश खड्का २०६
5 भिमशेन बस्नेत २३७
क्र.सं. खुल्ला प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि पुरुष मत6नारायण घिमिरे २४०
1 कपिल कार्की ३५० बिजयी
7 दोर्जे शेर्पा १८३
2 गुञ्ज बहादुर श्रेष्ठ ३७९ बिजयी
3 जीत बहादुर मगर ४६८ बिजयी क्र.सं. खुल्ला प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि महिला मत
4 विरेन्द्र श्रेष्ठ ८६ 1 कल्पना खड्का १४७
5 विष्णु कुमार घिसिङ २५०2डम्बर कुमारी भण्डारी १०९
6 भक्त बहादुर खड्का ७३3सन्ध्या घताने ८३
7 भक्ति लाल तामाङ ३०८
8 मनोज कुमार श्रेष्ठ १७६
9 राजु कुमार श्रेष्ठ ३४९ बिजयी क्र.सं. खस आर्य प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि मत
10 शंखर लाल ‍लामा योञ्जन ३७७ बिजयी 1 चेत खडका ९६
11 शुदर्शन थापा १११2श्रीराम कार्की ६४
12 सुजन ढुङ्गेल ३३१ बिजयी क्र.सं. आदिवासी जनजाति प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि मत
13 सुमन चौहान (माइकल) १३१ 1 ङावा शेर्पा ४६ ८७
14 सुवास घिसिङ २६५2कृष्ण सुनुवार ४४ ९६
15 सूर्य बहादुर श्रेष्ठ २७० क्र.सं. आदिवासी जनजाति प्रदेश सभा अधिवेशन महिला प्रतिनिधि मत
16 होम बहादुर थापा मगर (हेम) २६० 1 मेनुका सुनुवार ८६
17 ज्ञानेन्द्र राज आरण ३७८ बिजयी2अपना श्रेष्ठ ५७
क्र.सं. खुल्ला प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि महिला मत क्र.सं. दलित सभा अधिवेशन प्रतिनिधि मत
1 कविता थापा कार्की ३८१ बिजयी 1 सबिन बिक ९२
2 जानुका कार्की ३३५ बिजयी2तिलक सर्की ३४
3 तिलकमाया भण्डारी १८७
4 रीता आचार्य ढुङ्गेल २३६ क्र.सं. अपाङ्ग/अल्पसङ्ख्यक मत
5 सरस्वती राय ३१७ 1 गणेश बोहोरा ६४
6 ज्ञानु श्रेष्ठ ४६७ बिजयी2प्रबिण सुनुवार ९५
क्र.सं. खस आर्य प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि महिला मत
1 अर्चना कार्की २०६
2 शकुन्तला त्रिपाठी ४८० बिजयी
क्र.सं. खस आर्य प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि पुरुष पदको उम्मेदवारको नाम थर मत
1 शिवराज खड्का ३६६ बिजयी
2 शुशिल बुढाथोकी ३०५
क्र.सं. आदिवासी जनजाति प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि महिला पदको उम्मेदवारको नाम थर मत
1 मिश्रा माया तामाङ १९७
2 रनिला श्रेष्ठ ४२५ बिजयी
3 शान्ति मोक्तान ४५८ बिजयी
4 सपना थोकर २२५
क्र.सं. खुल्ला प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि पुरुष मत
1 आँधी लामा ३७१ बिजयी
2 निर्मल घिसिङ २०१
3 तारा बहादुर तामाङ मोक्तान १३२
4 विष्णु श्रेष्ठ २२९
5 यम बहादुर घिसिङ ३९१ बिजयी
क्र.सं. दलित प्रदेश सभा अधिवेशन प्रतिनिधि मत
1 अर्जुन गौतम वि.क २७४
2 ज्ञान बहादुर सार्की ४०४ बिजयी
क्र.सं. अल्पसङ्ख्यक मत
1 इन्द्र बहादुर माझी २६३
2 निर्माण माझी ४२४ बिजयी
बहिस्कार गर्दा पनि सकियो राप्रपा रामेछापको अधिवेशन
जनता भ्वाइस calendar_today १३ असोज २०७८, 1:06 pm
रामेछाप । लामो समयको अन्तरालमा भएको राप्रपा रामेछापको अधिवेसनले पार्टिका अध्यक्ष भरत वाईवालाई पुन अध्यक्ष पदमा निर्बाचित गरेको छ । एक पक्षका नेताहरुले गरेको बहिस्कारका वाबजुद पनि बुधबार मन्थलीमा सम्पन्न जिल्ला अधिवेसनले पार्टिका अध्यक्ष भरत वाईवालाई पुन अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको छ । पार्टि विधान अनुसार पदाधिकारी लगायत बाँकि सदस्य पहिलो बैठकले मनोनित गर्ने गरि अधिबेसनले क्षेत्र नं १ को अध्यक्षमा गोरे तामाङ्ग र क्षेत्र नं २ को अध्यक्षमा लाल बहादुर तामाङ्गलाई निर्वाचित गरेको क्षेत्र नं १ को अध्यक्ष गोरे तामाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टिको अधिबेसन सम्पन्न भईरहदा जिल्लाका एकथरि प्रभासालि नेताहरुले भने अधिबेसन प्रति असहमति जनाउँदै अधिबेसन बहिस्कार गरेका छन् । अधिबेसन वहिस्कार गर्ने हरुमा पार्टिका सह अध्यक्ष रामचन्द्र कडेल,केन्द्रिय सदस्यहरु लालध्वज तामाङ्ग,रीता माझी,सरस्वति श्रेष्ठ लगायतको समुह रहेको छन् । निति विधि र पद्धति अनुसार नभएको अलोकतान्त्रीक जिल्ला अधिवेसन आफुहरुका लागि अमान्य रहेकाले वहिस्कार गर्नु परेको कडेलले बताउनु भयो ।
जिल्ला अधिबेसनको उदघाट्न पुर्व मन्त्री एब केन्द्रिय सदस्य आङ्गछिरिङ्ग लामाले गर्नु भएको थियो । सो अबसरमा बोल्दै लामाले अब मुलुकमा परिवर्तनका खातिर राप्रपा लाई बैकल्पीक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।
पार्टि सचिब सिताराम ढकालको संचालन र भरत वाईबाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पुर्व सचिव शिवजी घिमिरे केन्द्रिय सदस्यहरु क्रमश दिनेश कार्कि,आङनिमा शेर्पा,मणिराज लामा,गंगा दोलखा जिल्ला अध्यक्ष लगायतका वक्ताहरुले आगामि निर्वाचनमा राप्रपाले निर्वाचन जित्ने दावी गर्दे अधिवेसन सफलताको शुभकामना दिनु भएको थियो ।
नगर भित्रका महिलाहरुको लागि निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम
जनता भ्वाइस calendar_today १३ असोज २०७८, 11:59 am
रामेछाप। रामेछाप नगरपालिकाले नगर भित्रका महिलाहरुको लागि निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिएको छ । महिलाहरुलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिका भित्रका २० जना महिलाहरुलाई नगरले १५ दिने ड्राइभिङ तालिम दिएको हो ।
उनिहरुलाई ट्राफिक नियम लगायतको सचेतना कक्षा पनि दिइएको थियो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उक्त तालिममा सहभागीहरुलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धि सचेतना कक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रदेश ‘ख’ को सभापती पदमा के.सी को समर्थन श्रेष्ठलाई
जनता भ्वाइस calendar_today १३ असोज २०७८, 4:14 am
रामेछाप । नेपाली कांग्रेस रामेछापको प्रदेश “ ख ” का सभापती पदका उमेद्वार सौरभ के.सीले अर्का उमेरद्वार राजेश श्रेष्ठलाई सर्मथन गर्दै आफ्नो उमेद्वारी फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल तरुणदल रामेछापका जिल्ला कार्यसमिती सदस्य समेत रहेका केसीले आफुले राजेश केसीलाई सर्मथन गर्दै सभापती पदमा आफ्नो उमेद्वारी नरहने बताए ।
रामेछापमा अब दुइजनाले मात्र प्रदेश “ ख ” को सभापती पदमा उमेद्वारी दिने भएको छ । रामेछापमा लबश्री न्यौपानेको पक्षबाट रामकृष्ण ढुङ्गेल र कृष्ण महतको पक्षबाट राजेश श्रेष्ठको उमेरद्वारी रहने छ । आज दिउसो १ बजे बाट ५ बजे सम्म उमेद्वारी दर्ता हुदै छ ।
नेकपा एकिकृत (समाजवादी) को जिल्ला अध्यक्षमा रमेश कुमार बस्नेत
जनता भ्वाइस calendar_today ९ असोज २०७८, 1:21 pm
९ असोज ,रामेछाप । नेकपा एकिकृत (समाजवादी) पार्टी (एस) को जिल्ला अध्यक्षमा रमेश कुमार बस्नेत चयन भएका छन् । शनिबार सदरमुकमा मन्थलीमा भएको नेकपा एकिकृत (समाजवादी) पार्टी (एस) को जिल्ला कमिटी भेलाले बस्नेतको अयक्षतामा २ सय ९१ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षमा धनयोञ्जन चयन भएका छन् भने सचिवमा लालसिंह तामाङ चयन भएका छन् । एसले शनिबार नै जिल्लामा पार्टी कार्यालय समेत संचालनमा ल्याएको छ ।
चोरि गर्ने ४ सार्वजनिक गर्यो प्रहरीले
जनता भ्वाइस calendar_today ९ असोज २०७८, 6:08 am
रामेछाप । भरुवा बन्दुक सहित धारिलो हतियार देखाएर त्रसित बनाई चोरी डकैती गर्ने चार जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक हुनेहरुमा गोकुलगंगा गाउँपालीका ६ बस्ने क्रमश ठुला भन्ने ३३ बर्षिय मिलन तामङ्ग,बर्ष २६ को राहुल भन्ने लाल बहादुर तामाङ्ग,जंगे भन्ने ३४ वर्षिय आकास तामाङ्ग,र वर्ष १८ को आषिश भन्ने भूमिराज तामाङ्ग रहेका छन् ।
उनिहरुलाई भरुवा बन्दुक तथा धारिलो हरिया देखाएर त्रसित बनाई चोरी डकैती गर्ने चार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले पक्राउ गरि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सार्वजनिक गरेको हो । गएको भदौ ३१ गते टाउँको र मुखमा रुपमाल बाँधेर आएका ४ जनाको समूहले लिखु तामाकोसी गाउँपालिका वडा नं. ६ जामुनेको चन्द्रबहादुर बुढाथोकीको घरमा बुढाथोकीको श्रीमती र दुई छोरीहरु मात्रै भएको मौका पारी चोरी गरेर भागेका थिए ।उनीहरुमध्य दुई जनालाई जिल्लाबाटै र दुई जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रमुख प्रहरि नायब उपरिक्षक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी गराउनु भयो ।
चोरहरुको साथबाट प्रहरीले भरुवा बन्दुक १ थान, पुरानो मोरु नोट ८ थान र अन्य ३५ थान, सुनको फुली दुई थान र अभियुक्तहरुले प्रयोग गरेर चार थान मोवाइल बरामत गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पिडितले दिएको जाहेरी अनुसार चोरहरुले १ तोलो बेरुवा रिङ २ थान, १२ आना सुनको पोतेसहितको भोप्टे १ थान, ६ अनाको सुनको ढुंग्री २ थान, ६ आना सुनको कुण्डल २ थान, १ तोलाको ९ गेडी, ६ आना सुनको तिलहरी सहितको पोते, सुनको औँठी, ४ तोला चाँदीको पाउजु, ८ अनाको माडवारी २ थान आधा तोलाको तिहरी, ६ तोलो चाँदीको कल्ली २ थान, ३ माना चाँदीको पुराना सिक्काहरु लगायतका समान र ३० हजार रुपैयाँ नगद चोरी भएको थयो ।
प्रारम्भीक अनुसान्धानमा अभियुक्तहरुले कसुर स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । उनिहरु चारै जनालाई जिल्ला अदालतबाट शुक्रबारनै ७ दिनको म्याद थप गरि अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरिले जनाएको छ । समुहमा रहेका उनिहरु अन्य घटनामा पनि संलग्न भएको हुन सक्ने अनुमान पनि प्रहरिले गरेको छ ।
बालयौन दुरुपयोग कसुरमा सुनापतीका एक युवक पक्राउ
जनता भ्वाइस calendar_today ४ असोज २०७८, 12:47 pm
रामेछाप । बालयौन दुरुपयोग कसुरमा सुनापती गाउँपालिकाका एक युवक पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको अनुसार सुनापती गा.पा वडा नं.-२ वस्ने अन्दाजी १८ वर्षको राजकुमार रायमाझि पक्राउ परेका हुन् ।
सुनापती गा.पा वडा नं.-२ वस्ने एक छात्रालाई रायमाझिले विभिन्न प्रलोभन देखाई बारम्बार फोन गरी अनावश्यक हैरानी दिई, ललाई फकाई एक्लै भेट्न बोलाई आफ्नो घरमा आफु सुत्ने कोठामा लगी बिभिन्न किसिमको डर त्रास धम्कि दिई अवान्छित अमर्यादित र अस्वभाविक ब्यवहार गरेको आरोपमा रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
३ गते विहान अंदाजी ५ बजे साँदिडाँडाबाट काठमाण्डौ तर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा रायमाझीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । बालयौन दुरुपयोग कसुरजन्य अपराधिक कार्य अन्तर्गत बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धानका लागि रायमाझीलाई जिल्ला अदालत रामेछापबाट ३ दिनको म्याद थप गरी प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेकोछ । ।
मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न (फोटो फिचर सहित)
जनता भ्वाइस calendar_today ४ असोज २०७८, 7:00 am
रामेछाप । रामेछाप जिल्ला फुटबल संघले सदरमुकाम मन्थलीमा संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेकोमैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न भएको छ । संघले संविधान दिवसका ेअवसरमा “स्वास्थ्यका लागि खेलकुद ः राष्ट्रका लागि खेलकुद” भन्ने नारासहित मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न गरेको हो ।
रामेछाप जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सुन्दर घिमिरेले वातावरण संरक्षण परियोजनाको सहयोग र मन्थली नगर यूवा सञ्जालको समन्वयमा आयोजना गेरेको मैत्रीपूर्ण खेलमा चार वटा समुह सहभागी जानकारी दिए । खेलमा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रामेछाप, उद्योग वाणिज्य संघ रामेछाप, कर्मचारी मिलन केन्द्र रामेछाप र नगर यूवा सञ्जाल सहभागी भएको थियो ।
पहिलो खेलमा उद्योग वाणिज्य संघ रामेछाप र नगर युवा सञ्जाल बीच भएको खेलमा उद्योग वाणिज्य संघलाई २–० ले हराउँदै नगर यूवा सञ्जाल फाइनल खेलमा प्रवेश गरेको थियो भने दोस्रो खेल अन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछाप र कर्मचारी मिलन केन्द्र बीच खेल भएको थियो । दोस्रो खेलमा पत्रकार महासंघलाई २–० गोल अन्तरले हराउदै कर्मचारी मिलन केन्द्र फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । फाइनल खेलमा भने कर्मचारी मिलन केन्द्रलाई पेनाल्टी मार्फत ३–१ ले हराउदै नगर यूवा सञ्जालले जित हासिल गरेको रेफ्री भिमसेन लामाले जानकारी दिए ।
गए सैजु,आए पहाडी
जनता भ्वाइस calendar_today ४ असोज २०७८, 6:43 am
रामेछापको नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा दिपककुमार पहाडी आउने भएका छन् । उनी असोज ४ गते सोमवार जिल्ला आउने छन् । पहाडीको लागि यो जिल्ला नयाँ भने होइन । पहाडीले यसअघि रामेछापको शहरी विकास कार्यालयमा रहेर काम गरिसकेका छन् । सिन्धुली स्थायी घर भएका पहाडी गृह मन्त्रालयबाट रामेछापको प्रजिअ भएर आउन लागेका हुन् । प्रजिअ पहाडीले आगामी सोमवार रामेछाप आउने तयारी भएको पालिका आवाजलाई जानकारी दिए । प्रजिअ गौलोचन सैजूको सरुवा भएसँगै नयाँ प्रजिअको रुपमा पहाडी आउन लागेका हुन् । रामेछापमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सैजु ६ महिना अघि आएका थिए । रामेछापबाट सैजु सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगमा सरुवा भएका छन् ।
मन्थलीको बोक्से भीरमा बोलेरो दुर्घटना, ३ को मृत्यू , १ घाईते
जनता भ्वाइस calendar_today ३१ भाद्र २०७८, 7:50 am
रामेछाप । काठमाण्डौबाट मन्थली हुँदै ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा हिँडेको बोलेरो मन्थलीमा दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यू भएको छ भने एक जना घाईते भएको छ । मन्थली नगरपालिका वडा नं ६ भलुवाजोर स्थित बोक्सेको भिरमा जीप दुर्घटना हुँदा जिपमा सवार तीन जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो ।
प्रदेश नम्वर ३–०१–०२३ च ३५१३ नम्वरको डबल क्याव बलेरो रामेछापको मन्थली स्थित बोक्सेको भिरमा दुर्घटना भएको हो । जिप दुर्घटनामा परि ओलखढुङ्गा जिल्ला खिजिदेम्बा गाउँपालिका वडा नं–६ खिजीफलाटेका चालक लाक्पा शेर्पा उनकी श्रीमती फुर्वा शेर्पा र गाडीधनी वाङछे शेर्पाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ ।
लाक्पा शेर्पा उनकी श्रीमती फुर्वा शेर्पाका छोरा १० वर्षिय बालक पेम्वा शेर्पा भने गम्भिर घाइते छन् । उनको मन्थली स्थित तामाकोशी अस्पतालमा उपचार सम्भब नभएपछि थप उपचारको लागि काठमान्डौ पठाइएको छ । जिप सडकवाट करिव ६ सय मिटर तल भिरमा खसेर क्षतविक्षत अवस्थामा रहेको छ । के–कती कारणले जीप दुर्घटना भएको सो बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको र मृतकको शव घटनास्थलवाट निकाली पोष्टमाटमका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीमा राखिएको छ भने आफन्तको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रवक्ता श्रीशंकर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
अभिभावक सचेत बन्ने की ?
जनता भ्वाइस calendar_today २९ भाद्र २०७८, 8:48 am
एकदिन साथीले भनिन्– हाम्रो नानीले खाना खानै मान्दैन । मोबाइल हेर्न थालेपछि भोकाको पनि थाहा पाउन्न । खाना खुवाउने बेलामा पनि जहिल्यै मोबाइलमा युट्युब या टिकटक खोलिदिएपछि मात्रै खाना खान मान्छ । युट्युब या टिकटक हेरेपछि फेरि म खुवाको खुवायै गर्छु । ऊ चाहिँ आँ गरेको ग¥यै हो । अघाको पनि थाहा पाउन्न ।
अचम्म परेँ म । पाँच वर्ष नपुगेकी बालिकामा कस्तो नमिठो लत लागेछ । त्यो उमेर भनेको त खेल्ने, कुँद्ने अनि चकचक गरिरहने उमेर हो । एकै ठाउँ बसेर युट्युबमा घोत्लिएर बस्ने उमेर नै हैन । तर अहिले समय यस्तो रहेन । हरेक बालबालिका मोबाइल, ट्याबलेटमा झुकेर कि त गेम खेलिरहेका हुन्छन् या त युट्युबमा मन परेको कार्टुन, फिल्म हेरिरहेका हुन्छन् । कि त टिकटक बनाइरहेका हुन्छन् ।
मेरो भदा केटो छ एउटा । जहिल्यै भन्छ –ल्यापटपमा फ्रि फायर खेल्न दिनु । ऊ जहिल्यै मोबाइलमा फ्रि फायर खेलिरहेको हुन्छ । तँलाई मोबाइलमा खेलेर पुगेन अझऐ ल्यापटप चाहियो ? भनेर भन्यो भने– मोबाइलमा भन्दा ल्यापटपमा मज्जा आउँछ भनेर जवाफ दिन्छ । म हैरान हुन्छु धेरै फ्रि फायर नखेल पढाइमा ध्यान दे भनेर । तर ऊ लगायत उसका धेरै साथीहरु वाइफाइ हुनेहरुको घरमा जम्मा भएर साँझ बिहान जतिबेला फ्रि फायर खेलिरहेका हुन्छन् ।
अहिले धेरै जसो विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन थियो । धेरै जसो विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी त हुन्थे । तर भिडियो, अडियो अफ गरेर गेम नै खेलिरहेका हुने। शिक्षकहरुको एउटै गुनासो हुन्थ्यो– भिडियो अफ गर्छ भनेर ।
यो त स्कूल जाने उमेरका केटाकेटीका कुरा भयो । स्कूल जाने उमेर नभएका केटाकेटी पनि टेलिभिजन, खेलौनामा भन्दा मोबाइलमै रमाउछन् । अधिकांश अभिभावकले आफ्नो बच्चा रोयो भने फकाउनका लागि मोबाइल हातमा राखिदिन्छन् । कति सजिलो । म धेरै अभिभावकलाई सम्झाउदै भन्ने गर्छु– बच्चालाई मोबाइल खेलाउन नदिनु न भनेर । तर उनीहरु उल्टै ‘नदिएर के गर्ने ? रोएर घर उचाल्न खोज्छ’ भनेर भन्छन् । यसो सोंच्छु –के बच्चाहरुले आमाबालाई नियन्त्रण गरेकै हुन् त ? कि मोबाइलले अभिभावक र केटाकेटीलाई नियन्त्रण गरेका हुन् ?
केटाकेटीलाई मात्र पनि के सम्झाउनु र ? हामी अभिभावक पनि फुर्सद मिल्ने बित्तिकै फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक र युट्युबमै झुण्डिइरहेका हुन्छौ ।
अहिलेको समयमा हरेक अभिभावक आफ्नो बच्चाको फ्रि फायर खेल्ने, टिकटकमा झुण्डिरहने बानीदेखि आजित छन् । केही गर्ने, सोंच्ने अनि साथीभाइसँग घुलमिल भएर सिर्जनात्मक कार्य गर्ने उमेरमा युट्युब, टिकटक र फ्रि फायरमा झुण्डिइरहे भने बालबालिकाको भविष्य के होला ?
अहिलेका टिकटक र युट्युब त झन् बालमैत्रीपूर्ण छँदै छैन । तैपनि हरेक अभिभावकले आफ्नो मोबाइलमा आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्न दिइरहेका हुन्छन् । यदि आफ्ना बालबालिकालाई युट्युब देखाउनु नै छ भने पनि उनीहरुको छु«ट्टै जिमेल बनाएर हेर्न दिइयो भने कमसे कम युट्युबले सिफारिस गरेका उनीहरुको उमेर सुहाउँदो सामाग्री हेर्न पाउनेछन् । हैन भने अभिभावकले हेर्ने साउथ इण्डियन ढड्याङ ढुडुङ फिल्म, सासुबुहारी झगडा गरेका, श्रीमान श्रीमतीको झगडामा पुलिस र छिमेकी जम्मा भएर कराएका अनि फलानाको श्रीमती फलाना नाठोसँग कोठामा भेटिइन् भन्ने खालका सामाग्री हेरेर हाम्रा बालबालिका हुर्किनेछन् ।
एकपटक सोचौं त, यस्ता सामाग्रीले बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ होला ? के हामी, हामीले हेर्ने यस्ता खालका सामाग्री हाम्रा बालबालिकालाई पनि देखाउन चाहन्छौं ? चाहदैंनौं र बच्चालाई सिर्जनशील बाटोमा डो¥याउन चाहन्छौं भने हरेक अभिभावकले अब गम्भीर भएर सोंच्ने बेला भएको छ ।
Kumar Shrestha calendar_today २९ भाद्र २०७८, 7:37 am
रामेछाप । सदरमुकाम मन्थलीसंगै जोडिएको विटारपार्कले निर्माण समिति, स्थानीय सरकार र जिल्लाका मन्त्रीहरुलाई गिज्याएको छ । बजेटको अभावमा निर्माणाधीन पार्कको काम अधुरो बसेर पार्क भित्रका संरचना झाडीले छोपिएपछि त्यहाँको दृश्य र अवस्थाले सत्तासिन मन्त्रीहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई गिज्याएको हो ।
सदरमुकामसँगै जोडिएको जिल्लाको पहिलो सुन्दर पार्कको रुपमा पहिचान बनाएको विटार पार्क भित्र निर्माण गरिएको मनमोहक चिज बस्तुहरुको दृश्यावलोकन गर्नक ालागि जिल्लाको अवलोकन गर्न र काम विशेषले मन्थली आउने सबैखाले मानिसहरु पुग्ने गरेका छन् । पार्कमा रहेको सगरमाथा हिमाल, सुन्धारामा रहेको पुरानो ९ तले धरहरा, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा, बालवालिकाहरुका लागि खेल्ने खेलौना, चिप्लेटी र पिङ सेल्फीटावर, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिक, ढुङ्गामा कुँदिएको सुन्दर गोर्खाली खुकुरी, त्यहाँ रहेका फिेनेस सामाग्रीहरु अवलोकन गर्न, खेल्न र रम्न आउनेहरुका लागि रोजाइको विषय हुन् ।
पार्कका विकासका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सोचेजति सहयोग पाउन नसकेकाले हामीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष सुनिल रायले बताए । उनले भने कोरोना र अविरल वर्षाका कारण पार्कमा आउनेहरुको संख्या घटेको र वर्षादसँगै हुर्किएको झाडीका कारण त्यस्तो देखिएको भएपनि समितिले पार्कमा आउनेहरुका लागि थप वातावरण बनाईरहेको छ ।
रामेछाप नगरिपालिका ८ को विटारमा रहेको उक्त पार्कले स्थापना कालदेखि नै सकरात्मक चर्चा कमाएको थियो । जसकाकारण पार्कको अवलोकनका लागि ठूलो संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । तर अहिले भने पार्कमा उम्रिएको झाडीले त्यहाँको असली सुन्दरतालाई नै ढाकी दिएको छ ।
सकरात्मक सोच भएका रामेछापका सहयोगी मन (रासम) का युवाहरुले आरम्भ गरेकोे पार्कको उद्घाटन निर्वतमान प्रदेश अर्थमन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले गरेका थिए । सो अवसरमा उनले पार्क निर्माणको कामको प्रंशंसा गर्दै, पार्कको निर्माणलाई आपूmले पनि गति दिने घोषणा गरे । मन्त्रीको आश्वाशन र आप्mनो क्रियाशीलताबाट हौसिएको पार्क निर्माण समितिलाई निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको अभाव भएको पनि अध्यक्षले बताए । उनले भने– हामीले पार्कको ओभेललाई झर्न दिनु हुदैन भन्ने मान्यताका साथ काम गरिरहेका छौ ।
यो समाचार पालिका आवाज साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
मन्थली मा वि.मा काण्डै काण्ड, काण्डमा मुछिने मन्थली नगरका कर्मचारी पनि
Kumar Shrestha calendar_today २९ भाद्र २०७८, 5:46 am
रामेछाप । संक्षिप्त प्रतिवेदनका नाममा गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्थली मा विको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मन्थली नगरपालिकाले चौतर्फी दवाबका बीच आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत समितिको पूर्र्ण विवरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उसले नियमानुसार राजश्व तिरेर प्रतिवेदन लिन चाहनेहरुका लागि प्रतिवेदनको प्रमाणित नक्ललप्रति आइतबारबाटै उपलब्ध गराएको हो ।
प्रतिवेदनले मन्थली मा वि काण्डैकाण्डको भूमरीमा फसेको प्रमाणित गरेको छ । भुमरीमा फसेको प्रमाणित हुनेहरुमा मन्थली नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका सदस्य, शिक्षक र कर्मचारीहरुसम्म रहेका छन् । उनीहरु मध्ये धेरैजसो कतै न कतै आर्थिक रुपमा जोडिएका छन् । नाम जोडिनेहरुमा नगरपालिकाका महाशाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीदेखि, दर्जन भन्दा बढी शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य ओमबाबु पुरीसम्म रहेका छन् ।
जिल्लामा नमूना मा विको रुपमा उँचो स्थान बनाएको हालको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियादेखि विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा भए गरेका कमी कमजोरी र अनियमितता, कर्मचारी र शिक्षक नियुक्ति, अनि तलब भुक्तानी प्रक्रिया, विद्यार्थीसंगको शुल्क असुली र तलब भत्ता प्रकरणमा शिक्षक तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको समेत काण्ड जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै अवैधानिक
वि.व्य.स. गठन सहयोग समितिले सार्वजनिक गरेको अभिभावकको नामावलीमा अभिभावकको संख्या १ हजार ६ सय ८९ जना थियो । तर २०७६÷१०÷०८ मा बसेको अभिभावक भेलामा उपस्थित अभिभावकको संख्या ४८३ मात्र रहेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि गणपूरक संख्या नपुगिकन भेला र निर्वाचन गरेको देखिन आउँछ । त्यस बाहेक उम्मेदवार दर्ता बाहेकका निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु कार्यतालिका बमोजिम सञ्चालन गरेको समेत देखिदैन । वि.व्य.स. छनौट सहजिकरण समितिको वैंठकमा समेत सवै उम्मेदवार उपस्थित भएका थिएनन् । मनोनयन दर्ता गराउने को मनोनयन नै फिर्ता नलिई मनोमानी ढंगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिने लगायतका कामको आधारलाई हेर्ने हो भने वर्तमान ब्यवस्थापन समिति अवैधानिक देखिन आउँछ ।
नियम विपरीत भत्ता लिनेमा नगरका कर्मचारी र शिक्षक पनि
विद्यालयले सञ्चालन गरेको विविध कार्यक्रममा खाजा खर्च तथा भत्ता धेरै लिनेमा मन्थली नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्म रहेका छन् । छिमेकी विद्यालय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिकाका महाशाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीले एकै दिन ६ हजारको खाजा खाएका छन् । त्यस्तै २०७८ असार २९ गतेको शिक्षक मनोपरामर्श र नेतृत्व विकास तालिममा समेत नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका विपरीत बुढाथोकीले एकै दिन १२ हजार भत्ता लिए । त्यसैगरी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सौभाग्य न्यौपानेले समेत सोही शीर्षकमा १२ हजार रुपैयाँ र तत्कालीन रामेछाप नगर शिक्षा शाखा प्रमुख शुकदेव नेपालले पनि ३ हजार भत्ता लिए । तर मन्थली नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा कार्यपत्र प्रस्तुत कर्तालाई २ हजार र तयारीकर्तालाई १ हजार दिने भनि प्रष्ट लेखिएको छ ।
छिमेकी विद्यालय अनुभब आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्थली मा विकै शिक्षक चन्द्रसिं धामीले ४ हजारको खाजा खाए भने शिक्षक नरसिंह धामीले पनि ३ हजारको खाजा खाएका छन् ।
शिक्षक भर्ना र शिक्षकको तलब
विद्यालयले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सामान्य नियम पनि पालना नगरी मनोमानी रुपमा शिक्षक भर्ना गरेको छ । सूचनानै प्रकाशन नगरी सोझै नियुक्ति पाउनेहरुमा २१ जना शिक्षक, ४ जना कार्यालय सहयोगी र चालक ३ जना, सहचालक २ जना र एक जना पुस्तकालयका कर्मचारी रहेका छन् । त्यसै गरी १० जना शिक्षकहरुले अध्यापन अनुमति पत्र विना नै जागिर खाने अवसर पाएका छन् ।
भविष्यको कर्णधार उत्पादन गर्ने जिम्मा लिएको विद्यालयले समेत कुनै ऐन कानून नमान्नुले मन्थली माध्यमिक विद्यालयको नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, मन्थली नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन, २०७५ र मन्थली मा विको शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा रहेको प्रक्रियासमेत वास्ता नगर्नुले मन्थली माध्यमिक विद्यालय ऐन कानुन विपरीत चलेको पुष्टि भएको छ । त्यस बाहेक मन्थली माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकको तलबमा पनि किर्ते गरेको छ । उसले मन्थली नगरपालिकालाई बुझाएको तलवी भर्पाईमा र विद्यालयमा भएको भर्पाईमा धेरै फरक देखिएको छ । मन्थली नगरपालिकालाई बुझाउने भर्पाईमा तलब स्केल बढी देखाउँदै विद्यालयले शिक्षकलाई भने कम तलव दिने गरेको पनि पुष्टि भएको छ ।
लेखापालको दोहोरो तलब
२०७७ पौष १ गते नियुक्ति लिएका लेखापाल संजिव श्रेष्ठको नाममा मन्थली माध्यमिक विद्यालयले उक्त मिति भन्दा अगाडि देखिनै उनको नाममा तलव निकासा गरेको छ । विद्यालयले लेखापाल श्रेष्ठ २०७५ फागुन १ गतेदेखि नै निरन्तर काम गरेको देखाई २०७७ माघ ११ गते म्याद थपि २०७७ साउन १ गतेदेखि २०७८ असारसम्म २५ हजारका दरले तलब बुझेको भर्पाई गरेको छ । सोझो आँखाले हेर्दासमेत निजको नाममा ६ महिना दोहोरो तलब लिएको देखिन्छ ।
अभिभावकसँग जबर्जस्ती शुल्क असुली
मन्थली माध्यमिक विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहयोग शुल्क र मासिक किस्ता सहयोग शुल्कको नाममा गरी अभिभावकसँग जबर्जस्ती सहयोग शुल्क उठाइएको छ । उसले एक वर्षमा कुल ४३ लाख १८ हजार १ सय असुलेको छ । नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गराएको छ तर अभिभावकसँग जबर्जस्ती उठाएको पैसाको सही सदुपयोग हुन सकेन । मन्थली माध्यमिक विद्यालयले अभिभावकसँग उठाएको रकम खाजा, चार्डपर्व खर्च र भत्ता शीर्षकमा खर्च गरेको छ । जसमा विद्यालयले ठाडो भर्पाई मार्फत र नगद उधारो बीलका आधारमा समेत भुक्तानी दिन पछि परेन ।
अनियमित देखिएको ४ लाख भन्दा बढि असुल्न निर्देशन
प्रतिवेदनले नगरका कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मले तलब, खाजा, लगायत विभिन्न शीर्षकको भत्ता वापतको शीर्षकमा नियम बाहिर गएर सुविधा लिए वापतको र प्र अ तथा शिक्षकहरुले समेत १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेमा १ प्रतिशत मात्र तिरेकोले तोकिएका व्यक्तिहरुसँगको सबै शीर्षकबाट गरी करिब ४ लाख १० हजार २ सय ४५ रुपैयाँ असुल उपर गर्न पनि भनेको छ ।
यस बाहेक नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त मन्थली मा.वि.को भौतिक निर्माणका लागि १ करोड भन्दा वढीको लागत मूल्य भएको टेण्डर प्रक्रियामा जान पर्ने हुन्छ तर मन्थली माध्यामिक विद्यालयले छात्रावास भवन निर्माणको काम गर्दा आर्थिक नियमको प्रक्रियालाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।
उक्त शीर्षकमा विद्यालयले १ करोड ५ लाख वरावरको लागत अनुमान तयार गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई टेण्डर प्रक्रियामा जानु पथ्र्योे तर मन्थली मा विले त्यसो नगरी बजेट ब्रेक डाउन गरी छात्रावास भवनको अधुरो कामको लागत स्टमेट तयार गराई विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल स्वयम् आफैले स्वीकृत गरी भौतिक निर्माणमा खर्च गरेका छन् । जुन प्रचलित खरिद ऐन तथा नियमावलीको विरुद्ध हो ।
प्रतिवेदनका अनसार– विद्यालयको नमूना विद्यालय निर्माण सम्बन्धि कार्यको अभिलेख अध्ययन गर्दा लागत अनुमान तीन लाल कन्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा लि द्वारा रु १ करोड ४९ लाख २५ हजार ३ सय उनान्सत्तरी रुपैया ७० पैसाको गरेको थियो । सो लागत अनुमान प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहालले प्रमाणित गरी मन्थली नगरपालिकामा सम्झौताका लागि पेश गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार सम्झौता रकम रु १ करोड, ७४ लाख, ९४ हजार २ सय ७० थियो र कार्य सम्पन्न मिति २०७८÷०३÷३१ सम्म थियो । सम्झौता अनुसार नमुना विद्यालय कार्यक्रमबाट १ करोड ५० लाख र सम्बन्धित विद्यालयको रु २४ लाख ९४ हजार २ सय ७० गरी जम्मा १ करोड ७४ लाख ९४ हजार २ सय ७० को डिजाइन, लागत अनुमान अनुसारको कार्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर विद्यालयले पुन दोस्रो पटक सोही आयोजनाको लागत अनुमान ग्रयाब ईन्जिनियरिङ प्रा.लि. बाट गरायो र सोको लागत रु ७८ लाख २० हजार १ सय २ पैसा ९४ लाई पनि प्र.अ. टंकप्रसाद दाहालले स्वीकृत गरे । सोही डिजाइन इस्टिमेट अनुसार निर्माण कार्य गर्ने भनी उपसमितिले निर्णय पनि ग¥यो ।
मन्थली मा विले बिना ल्याव टेस्ट, बिना आयोजना सूचना बोर्ड र सम्बन्धित पक्षले ब्यहोर्नु पर्ने रकम जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई ध्यान नै नदिई सरासर कामलाई अघि वढायो । विद्यालयमा भएका कार्य मध्ये शौचालय जाने बाटोमा पाली निर्माणका लागि रू ३ लाख ४४ हजार ८ सय ४२ पैसा ७४ र साइन्स ल्याब मन्दिर माथिको बाटोमा ब्लक राख्न रू ६ लाख ३३ हजार ७ सय ९९ पैसा ०७ लागतको अनुमानित ईष्टमेट गर्न सोही विद्यालयका प्राविधिक शिक्षक दिपेश बस्नेतलाई तयार गर्न लगाई प्र.अ.ले नै स्वीकृत गरे । जुन उपयोजना बनाउने र खर्च गर्ने कुनै पनि कानुनी अधिकार विद्यालयसँग थिएन ।
छात्रावास निर्माण कार्यको दोस्रो पटक गरिएको लागत अनुमानमा विद्यालयको पुरानो दुई कोठे ट्रस्ट भवन भत्काउने र हटाउने वापत खर्च हुने गरि रु १ लाख २९ हजार १ सय १४ पैसा ३४ राखे पनि ट्रस्ट भवनबाट आएका जस्ता पाता, फलामे ट्रस्ट तथा झ्याल ढोकाहरु कहाँ र कसको जिम्मामा छ भन्ने कुराको कुनै पत्तो छैन ।
निर्माणाधीन छात्रावास भवनको दोस्रो पटक तयार गरिएको नक्सा बमोजिम एक तला भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तर उक्त शीर्षकको रकम मन्थली माध्यमिक विद्यालयले भवन निर्माण नै नसकी निणर््ायका आधारमा आफ्नो खातामा निकासा गराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो समाचार भदौ २८ को पालिका आवाजमा प्रकाशित भएको छ ।
Kumar Shrestha calendar_today २५ भाद्र २०७८, 7:14 am
मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मा सञ्चालित मन्थली माध्यामिक विद्यालयमा भएको चरम अनियमितताको लागि गठित स्थलगत छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन लुकाउन मन्थली नगरपालिकाले ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थलगत छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दै नगरपालिकाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत सारसंक्षेप दिँदै आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको थियो । पत्रकारहरूले स्थलगत छानविन प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै समाचार प्रकाशन गर्दा नगरपालिकाले उक्त प्रतिवेदन दिनको सट्टामा ध्यानाकर्षण निकाल्दै आफूलाई पानी माथीको ओभानो बनाउन खोजेको छ ।
मन्थली माविको अनियमितमा नगरपालिकाको पर्दा
हेर्नुस् नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण जस्ताको त्यस्तै
मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मा सञ्चालित मन्थली माध्यामिक विद्यालयका विरुध्द नगरपालिकामा परेको उजुरीको कारवाही र किनाराका लागि गठित स्थलगत छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणका लागि गरिएको पत्रकार सम्मेलन र छानविन समितिको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाईन खवरमा आएको टिप्पणी प्रति यस नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रतिवेदनले औल्याएका अनियमितताका विषयमा प्राप्त सुझाव अक्षरशः कार्यान्वयन गरी विवरण पेश गर्ने गरी नगर शिक्षा समितिले निर्णय गरी कार्यारम्भ समेत भई सकेको छ ।
मन्थली माध्यामिक विद्यालयमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम लागु भएको र सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरबाट आ.व.२०७७/७८ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक करोड र शैक्षिक व्यवस्थापनतर्फ रु पचास लाख गरी रु एक करोड पचास लाख रुपैया उपलब्ध गराउने गरी यस नगरपालिकामा अख्तियारी सहित वजेट प्राप्त भएको थियो । अनुदान रकम उपलब्ध गराउदा विद्यालय र स्थानीय तहबीच सम्झौता गरी विद्यालयले भौतिक निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली भित्र रही स्वीकृत गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा रहेको भौतिक निर्माण कार्य गर्ने गरी पहिलो पटक पचास प्रतिशत र वाँकि रकम कार्य प्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउन प्राप्त निर्देशन र कार्यविधि बमोजिम मिति २०७७/०७/२४ मा पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको उत्तरीधमा कार्यको लागि विद्यालयलाई ताकेता गर्दै गर्दा मिति २०७८ असार २३ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रेषित परिपत्रबाट लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षण लगायतका कार्यहरुका लागि सम्बन्धित विद्यालय नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुने गरी स्वीकृत कार्यक्रमको लागि विनियोजित वजेट सम्बन्धित विद्यालयको खातामा निकासा दिइ सम्पन्न बाँकी काम यथाशिघ्र सम्पन्न गराउनु भन्ने प्राप्त निर्देशन बमोजिम मिति २०७८/०३/२५ गते अन्तिम किस्ता रकम मन्थली माध्यामिक विद्यालयको खातामा निकासा पठाईएको र सो बजेटबाट भए गरेको सम्पूर्ण निर्माण कार्यको जवाफदेही सम्बन्धित विद्यालय नै रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।
Kumar Shrestha calendar_today २४ भाद्र २०७८, 7:48 am
रामेछाप ।मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको मन्थली माविले गरेको अनियमितताको विषयमा छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन मन्थली नगरपालिकाले लुकाएको छ । हिजो (बुधबार) गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाले सारसंक्षेप मात्र दिएर बाँकी विषय गुपचुप राखेको हो ।
मन्थली माध्यमिक विद्यालय भित्र चरम आर्थिक अनियमितता भएको भनि मन्थली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा उजुरी परे पछि नगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर नगरपालिकाले छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिबेदन लुकाउँदै चरम अनियमितता माथी पर्दा हाल्न खोजेको छ । विद्यालयले छात्राबास भवन निमार्ण गर्दा लाखौ रुपैया भष्ट्राचार भएको र नमुना विद्यालय संचालन गर्न आएको वजेट समेत अनियमितता भएको लगाएतका विषयमा मन्थली नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा उजुरी परेको थियो ।
गठित समितिले मन्थली माध्यमिक विद्यालयमा भएको सबै अनियमितताको सत्यतथ्य प्रतिवेदन मन्थली नगरपालिकामा पेश गरेको थियो । धेरै दिन सम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै पत्रकारहरूले चर्को बिरोध गरेपछि मन्थली नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन त गर्यो तर आँखामा छारो हाल्न मात्र खोज्यो । पत्रकार सम्मेलनको नाममा नगरपालिकाले स्थलगत छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि छोटो खेस्रा बनाएर पत्रकारहरूलाई थमाई दियो । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी पत्रकारहरुले पटक–पटक स्थगलत छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान राखे पनि मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रशेमकुमार बस्नेत र शिक्षा शाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकी मुखामुख गरेर समय बिताए तर सो स्थलगत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् ।
मन्थली माविमा धेरै अनियमितता भएको र धेरै कर्मचारीहरुको नाम मुछिएकाले उक्त प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न समस्या भएको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले बताए । मन्थली माविमा भएको अनियमितताको अख्तियारमा उजुरी परेकोले सवै विषयवस्तु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै नगरप्रमुख बस्नेतले आफ्ना कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पक्ष लिए ।
मन्थली माविको अनियमिततामा स्थलगत छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मन्थली नगरपालिकाका शिक्षा शाखा, लेखा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समेतले गरेको अनियमितताको बारे खुल्ने भएपछि मन्थली नगरपालिकाले तत्काल मन्थली नगर शिक्षा समितिको वैठक राखि सम्पुर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको श्रोतले जानकारी दियो ।
श्रोतका अनुसार मन्थली माध्यमिक विद्यालयमा निमार्णाधिन छात्राबास भवनको काम सम्पन नहुँदै मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिृकत र लेखा अधिकृतको मिलेमतोमा कागजात मिलाएर विद्यालयलाई रकम निकासा दिइएको थियो । जसको कारण लेखा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समेत अनियमिता गरेको बिषयमा फस्ने र पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने डरले पत्रकार सम्मेलनलाई ढिला गर्दै पत्रकार सम्मेलन अगाडी नै कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए ।
छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालयमा चरम अनियमितता भएको देखिएको प्रतिवेदन लुकाएर पत्रकार सम्मेलन गर्नु अनियमितता ढाक्ने प्रयास भएको नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले जानकारी दिए ।
छानविन समितिले वुझाएको प्रतिवेदन मध्ये केही सारसंक्षेपमा मन्थली माविले शिक्षक तथा कर्मचारी व्ययवस्थापन भर्ना गलत गलत देखिएको, बस व्यवस्थापनको नाममा मनलाग्दी रुपमा भुक्तानी गरेको, नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राबास भवन निमार्णमा अनियमितता देखिएको लगाएतका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्थली माविले बालबालिकाको नाममा अभिभावकबाट शुल्क असुली गरेको, निजी श्रोत र शिक्षक भर्ना प्रक्रिया नै गलत भएको, वित्तिय व्यवस्थापनमा मनलाग्दी रुपमा खर्च गरेको लगायतका विषय भने सारसंक्षेपमा राखिएको छ ।
मन्थली नगरपालिकाका विद्यालय भदौ २७ गतेदेखि खुल्ने
जनता भ्वाइस calendar_today १९ भाद्र २०७८, 8:40 am
मन्थली नगरपालिकाले यहि भदौ २७ गतेदेखि सबै विद्यायमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भएको छ । १७ महिना देखि बन्द अबस्थामा रहेका मन्थली नगरपालिकाका विद्यालय भदौ २७ गते देखि खुल्ने भएका हुन । २०७८ भदौ १८ गतेको मन्थली नगर शिक्षा समिती को ३० औ बैठकले भदौ २७ देखि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चैत्र ११ २०७७ देखि लगाइएको लकडाउनसँगै बन्द रहेका विद्यालय पहिलो चरणको कोरोना केही कमी हुँदा खुल्ने तयारी गरिएको भएपनि दोस्रो चरणको कोरोना सुरु भएसँगै बन्द भएका थिए । त्यसयता विद्यार्थीको पठनपाठन, परिक्षा संचालन लगायतका शैक्षिक गतिविधिका अनलाइन बाट संचालन हुँदै आएका थिए ।
मन्थली नगरपालिकामा ६६ वटा सामुदायिक र ६ वटा नीजि विद्यालयमा गरी करिव ११ हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
भान्सा घरमा आँखा जाँच
Kumar Shrestha calendar_today १७ भाद्र २०७८, 8:23 am
रामेछाप । जिल्लाको एकमात्र सामुदायिक आँखा केन्द्रको भवनमा पहिरोले क्षती पुर्याएर भवन अभाव भएपछि भान्सा घरबाट विरामीको आँखाको उपचार गर्न सुरु गरिएको छ ।
भदौ १३ गतेको वर्षाका कारण जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्रको भवन भएको स्थानमा भित्तातर्फवाट आएको पहिरोले भवनमा क्षती पुर्याएपछि आँखा जाँचको सेवा बन्द गरिएको थियो । उक्त सेवा हाल भान्साको लागि बनाइएको प्रिफ्याव भवनबाट उपचारा शुरुवात गरिएको तामाकोशी अस्पतालका अध्यक्ष गोबिन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।उनले भने– ’भएको भवन पहिरोले क्षती पुग्यो । अर्को भवन तत्काल बन्ने अवस्था छैन ।’
तिलगंगावाट आएको टोलीले निरिक्षण गरे पश्चात मात्रै भवन वरपर पुरिएको माटो हटाउने र नयाँ भवन निमार्णको कामलाई अघि वढाइने तामाकोशी अस्पतालका सचिव हिमाल ढुंगेलले जानकारी दिए ।
स्व.जगदिश प्रसाद घिमिरेको पहलमा २०५७ सालमा तिलगंगा आँखा अस्पताल काठमाण्डौंको सहयोगमा सामुदायिक आँखा केन्द्रको स्थापना भएको थियो । तिलगंगा आँखा अस्पतालले केही वर्ष अघि मात्रै ५० लाखको लागतमा प्रिफ्याव भवन निमार्ण गरि त्यहीँ भवनवाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो। सामुदायिक आँखा केन्द्रमा अहिले रामेछापको अलावा दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र सोलु लगाएतका जिल्लाहरुवाट विरामीहरु आँखा जाँच गराउन आउने गरेका छन् ।
जनता भ्वाइस calendar_today १६ भाद्र २०७८, 5:56 am
रामेछाप । जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं–७ भुजीमा रहेको प्रहरी चौकी नै असुरक्षित रहेको छ । दिनरात नागरिकहरुको सेवामा जुट्ने नेपाल प्रहरी नै असुरक्षित तवरले बस्दै आएका छन् । जिल्लाको दुर्गम गाउँ भुजीमा रहेको प्रहरी चौकी भौतिक पूर्वाधार नहुँदा जस्ताको टहरा मुनी कार्यालय संञ्चालन गर्दै आएको लामो सयमभ इसक्दा चौकीको नयाँ भवन निमार्ण हुन सकेको छैन् । उच्च लेकाली भुभागमा पर्ने भुजीमा अत्याधिक चिसोका कारण त्यसक्षेत्रका जनजीवन हिउँदको समयमा प्रभावित हुँदै आएको छ ।
जस्ताको घेराबार र जस्ताकै छानामुनी बसेर सेवा दिदै आएका प्रहरी जाँडोको समयमा रातभरी निदाउँन सक्दैनन् । जस्ताबाट चुहिने शित र घेरावारवाट छिर्ने चिसोका कारण रातभरी जाग्राम बस्नुपर्ने वाध्यता रहेको प्रहरी चौकी भुजीका एक प्रहरीले आफ्नो नाम नछाप्ने शर्तमा बताए । उनले भने– अत्यन्तै चिसो ठाउँ छ । दिनभरी हाबा चल्छ, रातभरी जस्ताको छानोबाट शित चुहिएर सुत्नै सकिदैन् ।
जस्तै जस्ताको टहराले निमार्ण गरिएको प्रहरी चौकी भुजीमा कार्यरत प्रहरी र उनीहरुले प्रयोग गर्ने हातहतियार जोगाउन नै मुस्किल पर्दै आएको छ । भुजी वडा कार्यालयसँगै बस्दै आएको प्रहरी चौकीको अवस्था हेर्दा आफुलाई लाजमर्नु भएको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं–८ का वडा अध्यक्ष रुद्रमणी नेवारले जानकारी दिए । उनले भने– हामीले प्रहरी चौकीको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरेका छौं । सो जग्गामा चाडै नै भवन बनाउन पाए प्रहरीलाई ठूलो राहात हुने थियो । हामीले प्रहरीले नागरीकलाई सेवा नि सकेन समेत भन्न सकेका छैनैं प्रहरीले यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा दिन्छ । चिसो मौसममा जाडोको कारण वस्न समस्या रहेको छ, सित परेर भित्र बसिसक्न हुन्न, गर्मीको समयमा झरी पर्छ पानी छिर्च के गर्ने समस्या छ अध्यक्ष नेवारले भने हामी गर्न पनी के नै सक्छौ र हेरेर बस्नको बिकल्प । प्रहरीलाई आफ्नै ज्यान जोगाउन समस्या छ नागरीकलाई सेवा दिन कसरी सकोस यस विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख नवराज ढुङ्गाना भने छिट्टै भवन बनि सक्ने बताउछन् । प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार प्रदेश सरकारको क्रमागत योजना अनुसार काम थालनि भै सकेको छ तर काम सम्पन्न हुन भने अझै समय लाग्नेछ ।
काठबाट बनेका वस्तुहरु लोपहुदै
जनता भ्वाइस calendar_today १६ भाद्र २०७८, 5:48 am
रामेछाप । रामेछापमा परम्परागत रुपमा काठबाट बनेका ठेकी, पाथी र माना लगाएतका वस्तुहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । रामेछापमा परम्परागत रुपमा काठवाट निर्मित कलात्मक तरीकाले कुदिएका काठका दुध दुहुने ढुग्रो, दहि जमाउने ठेकी र अन्न भर्ने पाथी र माना साथै घ्यु जमाउने हर्पे जस्ता वस्तुहरु उत्पादन भएर त्यतिकै मात्रामा गाउँमा विक्री हुने गरेको थियो । अहिले गाउँमा ती वस्तुहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पहिला प्लाष्टिक, सिलाभर र स्टीलबाट बनेका भाँडाहरु भेट्न मुस्किल पर्ने गर्दथ्यो त्यस कारण काठबाट बनेका वस्तुहरु बिक्रिबितरण हने गथ्र्यो तर अहिले जता ततै पलास्टिक जन्य बस्तु प्रयोग भएको कारण काठबाट बनेका वस्तुहरुलोप हुन थालेको व्यवसायी मन्थली नगरपालिका–१३ फुलासीका धनवहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनले भने पहिला प्लाष्टिक, सिलाभर र स्टीलबाट बनेका भाँडाहरुको सट्टामा गाउँकै सामुदायिक वन र व्यक्तिको वारीको कान्लामा हुने ठूलो रुख कटहर र दारका काठवाट ठेकीहरु निमार्ण हुने गर्दथ्यो । तर अहिले गाउँमा काठको अभाव एकातिर छ भने यो पेशामा लाग्ने व्यक्तिहरु समेत पलाएन भएको ठेकी व्यवसायी विश्वकर्माले बताए ।
ठेकी व्यवसायी विश्वकर्माले भने अहिले सामुदायिक वनमा काठ काट्न पाइदैन । अर्कातिर व्यक्तिको घर कान्लाका रुखहरु पनि मासिदै गए । पहिला पहिला काठवाट वनेका ठेकीहरुको माग अत्याधिक हुने गर्दथ्यो । अहिले गाउँघरमा भैसी गाई पाल्न नै छाडे । कसैले पाली हाले भने पनि दुध सिधै डेरीमा विक्री गर्न थाले त्यसकारण यो पुस्तौ देखी गर्दै आएको पेशा लोप हुन लागेको हो । पहिला ठेकी पुरयाउँन नै गाह्रो हुने गर्दथ्यो । अहिले बनेका ठेकी समेत विक्री नभएर घरमा थन्काउन वाध्य हुनु परेको उनले गुनासो गरे ।
पहिला काठबाट बनेको ठेकीमा दुध जमाउँदा राम्रो दही बन्ने गर्दथ्यो । काठको ठेकीमा पारेको मोही अत्यन्तै मिठो र स्वादिलो हुने गर्दथ्यो तर प्लाष्टिक, सिलाभर र स्टीलबाट बनेका भाँडाहरुमा जमाको दहि महि र घिउको त्यसतो स्वाद नहुने स्थानिय माइकल चौहानले बताए ।
। अर्का एक स्थानि माधब कार्कीका अनुसार अहिले बजारमा जताततै प्लाष्टिक, स्टील र सिलाभरका सामानहरु निस्कीए तर पनी ति प्लाष्टिक, सिलाभर र स्टीलबाट बनेका भाडामा राखेको दुध बिग्रने उगग्ल आउने गरेको बताए । काठवाट वनेका जस्तो ठेकी अन्य वजारमा खरिद गरेका आल्मुनियमका भाँडाहरु नहुने र त्यसमा जमाएको दुधवाट वनेका सामाग्रीहरु पनि मानव स्वास्थ्यको लागि गुणकारी नहुने उनले बताए ।
रामेछापमा कांग्रेसको वडाअधिवेशन भदौ २३ मा हुने
जनता भ्वाइस calendar_today १४ भाद्र २०७८, 10:31 am
नेपाली काँग्रेसकाे १४ औँ महाधिवेशनकाे लागि सम्पन्न हुने वडा अधिवेशन भदाै २३ गते बुधबार हुनेभएकाे छ । केन्द्रिय प्रतिनिधिको रोहबरमा हुने भदौ १८ गते को अधिवेशन २३ गते हुने भएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि केन्द्रबाट खटाएको प्रतिनिधि तथा निर्वाचन अधिकृत श्री बिष्णु लुइँटेलका अनुसार रामेछापको ६४ वडामा एकैदिन अधिवेशन हुने भएको छ ।
अन्य जिल्लाहरूमा भदौ १८ गते अधिवेशन हुने भएपनि रामेछाप जिल्लामा भने भदौ २३ गते वडा अधिवेशन हुने भएको छ ।
सुनारपानीमा नगद सहित सामान चोरी
Kumar Shrestha calendar_today १४ भाद्र २०७८, 5:08 am
१४ भदौ सोमबार। गए राति मन्थली नगर पालिका वडा नम्बर ५ मा सुनारपानीको पसलमा चोरी भएको छ ।कार्की किराना पसल नामक राजेन्द्र कार्कीको पसल बाट नगद २ लाख चोरी भएको छ । सुगम स्टोर्स एण्ड सप्लायर्स नामक सुमन कार्कीको पसल बाट १० हजार नगद सहित सामानहरु चोरी भएको छ भने बिमला किराना स्टोर्सका सामानहरु समेत फाल्दिएको पाइएको छ।
सबै पसल हरुको झ्याल फुटाएर चोरी गरेको स्थानिय श्रीजन कार्की र किरण कार्किले जानकारी दिए। थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको टोलि चोरी भएको ठाउमा पुसिसकोको छ ।
मन्थलीमा १५ शैयाको अस्पताल शिलान्यास
जनता भ्वाइस calendar_today १० भाद्र २०७८, 11:37 am
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। आकाशेमा निर्माण हुन लागेको उक्त अस्पताल भवनको शिलान्यास मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले गरेका छन् । मन्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरि १५ शैयाको अस्पताल बनाउन लागिएको हो ।